चीनबाट आज आठ लाख डोज खोप आउँदै, आजै अर्को जहाज खोप लिन जाने - Rising Dainik
July 22, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on चीनबाट आज आठ लाख डोज खोप आउँदै, आजै अर्को जहाज खोप लिन जाने
काठमाडौं, । चीनबाट आज (बिहीबार) आठ लाख डोज भेरोसेल खोप नेपाल ल्याइँदैछ । हिजो बेइजिङ गएको नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजले आज दिउँसो काठमाडौंमा खोप ल्याउनेछ ।
एमाले शक्तिशाली सांसद भिम रावलको राजीनामा फिर्ता !
यी हुन् पदकै माया मा’रेर ओलीलाई साथ् दिने ७ नेता, माधव समूहले गर्यो नसोचेको घोषणा !
विनयजंग प’क्राउ पर्दै, सपनाले दिइन् प्रहरी चौकीमा उजुरी, विनयजंग फरार (भिडियोसहित)
ओली समूहमा योगेशको इन्ट्री …